Leliphi ikhadi lemizobo endilifakileyo? kwaye loluphi uhlobo lwekhadi lemizobo endingalifaka? | Iindaba zeGajethi
ENgenye imini umhlobo wam uFernando wandibuza Yeyiphi ikhadi lemizobo endinokuyifaka ukuze ndiyidlale ngemidlalo ethile engasebenzi kakuhle kunye nekhadi lemizobo oyifakileyo ngoku.
LImpendulo ilula, kuya kufuneka uthenge ikhadi lemizobo ebelisoloko likho kwintengiso iinyanga ezimbalwa, ubuncinci iinyanga ezine okanye ezintlanu, ngale ndlela akuyi kufuneka uhlawule ngobutsha kwaye unokufumana ikhadi elilungileyo ixabiso elihle. Ingxaki kuphela kukwazi loluphi uhlobo lwekhadi onokulufaka kwikhompyuter Ukusukela ngokuxhomekeka kubuxhakaxhaka be-slots ("slots") obunayo ikhompyuter, ikhadi lemizobo okanye elinye kuya kufuneka lifakelwe.
Azikhona ngoku iintlobo ezintathu zonxibelelwano zamakhadi emizobo, nangona enye yazo iphelelwe lixesha kwaye uya kuyifumana kwiikhompyuter ezindala. Olu luqhagamshelo ezintathu ukusuka kancinci ukuya kwisantya esiphezulu sokudlulisa:
PCI. Azisasetyenziswa, ziikhompyuter ezindala kuphela ezizisebenzisayo, kodwa kusekho inani elikhulu iikhompyuter ezindala kuneminyaka emi-5 ezinezihlanganisi zePCI kuphela. Ukuba unengxaki yokuzifumana, ungazama Ngenye indlela.
I-AGP 4x kunye ne-AGP 8x. Banikezela ngokusebenza ngcono kune-PCI. Ukuba ikhompyuter yakho inayo ngaphezulu kweminyaka emibini unokhetho oluninzi lokuba nebhodi yomama enesi sixhobo.
I-PCI Express, kwaziwa njenge I-PCI-E o PCI. Nguye obonelela ngesona santya siphezulu sokudlulisa. Phantse zonke iikhompyuter ezine ngaphantsi kweminyaka emibini endala esi sixhobo sifakelwe.
QNdifuna ukucacisa ukuba nangona Okuphambili kwisantya sokudlulisa iziphumo ezingcono, kunokuvela ukuba i-PCI-E enexabiso eliphantsi ayidluli kwi-AGP ebiza kakhulu.
ENgayiphi na imeko kwaye njengesikhokelo esikhawulezayo, gcina oku kulandelayo engqondweni. Ukuba ibhodi yakho ine-PCI kunye ne-AGP port, sebenzisa AGP. Ukuba une-PCI kunye ne-PCI-E, sebenzisa I-PCI-E. Kwaye ukuba une-AGP kunye ne-PCI-E, bambalwa iibhodi zoomama kubandakanya izihlanganisi ezibiniKuya kufuneka usebenzise Uphando ukuthelekisa amakhadi emizobo yeetekhnoloji ezimbini kwaye uthathe isigqibo kwenye. Ngokwesiqhelo, i-PCI-E ibonelela ngeempawu ngakumbi kodwa ngexesha lotshintsho phakathi kweetekhnoloji ezimbini ezinye i-AGP ziphuculwe kwi-PCI-e, ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nto ukuba uza kuthenga imodeli yekhadi yakudala.
EKweli nqaku ndiza kugxila ekuboniseni indlela yokwazi ukuba yeyiphi indawo yokudibanisa (i-slots) ikhompyuter yakho inayo uyazi ke loluphi uhlobo lwekhadi lemizobo onokulithenga. Kwelinye inqaku ndiza kwenza izindululo malunga namakhadi okwangoku anikezela ngesiphumo esihle ngexabiso elifanelekileyo kwitekhnoloji nganye.
PUkwazi ukuba loluphi unxibelelwano kwikhompyuter yethu ngaphandle kokuluvula, kuya kufuneka sisebenzise inkqubo yohlalutyo. Ukuba awukenzi okwangoku, kuya kufuneka ufunde "Hlalutya iPC yakho ngeWinAudit". Ukuba ulandela onke amanyathelo aboniswe kweli nqaku uya kuba phambi kwakho a ingxelo epheleleyo kwikhompyuter yakho esiya kuyisebenzisa ukwazi ukuba loluphi unxibelelwano onalo kwaye loluphi olufumanekayo.
SUkuba sele unayo ingxelo esuka kwikhompyuter yakho kwiscreen, singaqala.
Leliphi ikhadi lemizobo endilifakileyo?
1) Qaphela ukuba kwiscreen sengxelo unokwahlula ngokucacileyo imimandla emibini, enye yasekhohlo ibizwa «Iindidi» kunye nelungelo esiza kulibiza "Ingxelo yendawo". Ukuba indawo "yeendidi" imxinwa kakhulu, ungayandisa ngokunqakraza phakathi kokwahlulahlula zombini ezi ndawo kwaye ngaphandle kokukhulula iqhosha, tsala uye ngasekunene de ikholam yasekhohlo ibonakale ngokucacileyo.
2) Kwi «Iindidi» indawo, cofa emnqamlezweni ovela ecaleni "Izixhobo" ukwandisa olo didi. Ngoku uza kubona kumgca wokuqala "Bonisa iiadaptha" kwaye ukuba ucofa umnqamlezo obonakala ngasekhohlo uza kubona ikhadi lemizobo olifakileyo.
3) Kwimeko yam likhadi lemodeli yeNVIDIA "IGeForce 6600". Ukuba ujonga «indawo yengxelo» uza kubona imodeli yekhadi emgceni «Inkcazo»Uya kubona umenzi "Umenzi" kunye nesinxibelelanisi esisetyenziswa likhadi «Indawo».
Njengoko ubona emfanekisweni, iWinAudit inika ingxelo yokuba ikhadi liqhagamshelwe kwizibuko le-PCI kodwa ayicacisi ukuba yi-PCI eqhelekileyo okanye i-PCI Express port. Ukufumanisa ukuba zeziphi izihlanganisi ezisetyenziswa likhadi, sinokukhangela ngaphakathi Uphando ithatha njengesalathiso solwazi olunikwe kwi «Inkcazo». Kwimeko apho unekhadi le-AGP elifakiweyo, liya kuvela «AGP ibhasi» kumgca «Indawo» (jonga umfanekiso).
ANgoku siza kubona ukuba loluphi uhlobo lwezihlanganisi onazo kwikhompyuter yakho kwaye zeziphi ezikhululekileyo ukwazi ukuba loluphi ukhetho onalo xa ukhetha ikhadi lemizobo elitsha.
Leliphi ikhadi lemizobo endingalifaka?
NgoLwesithathu ndizakuligqiba inqaku. Kuye kwafuneka ndenze izilungiso emva kokufunda ingxelo IPenTxO. Ngomso siza kubona indlela yokwazi ukuba loluphi unxibelelwano esinalo lokuthatha ingxelo ye-WinAudit. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Leliphi ikhadi lemizobo endilifakileyo? kwaye loluphi uhlobo lwekhadi lemizobo endingalifaka?
Uthuli Lokugqibela sitsho
Ewe, ngalo mzuzu ndibaleka ne-8600gts kwaye phakathi kwayo yonke into imidlalo ihamba kakuhle, ngoku kunyaka olandelayo ndihlaziya kwakhona heh, inqaku linomdla kakhulu, imibuliso
Phendula kuthuli lokugqibela
Unokubona ukuba leliphi na ikhadi xa uza kuphumeza kwaye ubeke "dxdiag" kwaye ukusuka apho uye kwiScreen.
Em…. Ndicinga ukuba ulwazi lwakho aluchanekanga. Kukho iindidi ezimbini zokubeka amakhadi emizobo okwangoku. I-PCI isweleke kunye nabandulelayo be-PIII okanye kwenye indawo. Namhlanje kukho i-AGP kunye ne-PCIE kuphela. Ikhadi lakho yiNvidia 6600 njengoko usithi yi-PCIE eqhagamshelwe kwizibuko lePCIE lebhodi yakho. Andazi nokuba ndiyazichaza na. I-AGP yayisetyenziswa kwi-AMD Athlon (XP nakwindawo encinci i-XP 64, ngakumbi ezo zazisebenzisa iprosesa engama-754, phantse zonke ezingama-939 kwaye kamva, ukuba ayizizo zonke zaziyi-PCIE) nakwiPIV. Andazi nayiphi na ikhompyuter enebhodi efanelekileyo ye-Intel Core Duo okanye iCore 2 Duo ene-AGP. Ukuba kukho nantoni na ethe ngqo kwiimodeli.
Ngayo yonke le nto ndifuna ukuyithetha…. Ukuba unekhompyuter engaphezulu kweminyaka emi-2 kunokwenzeka ukuba ube nekhadi le-AGP, ukuba ikhompyuter yakho ingaphaya kweminyaka emi-2 phantse ngokuqinisekileyo ukuba yi-PCIE, eneneni iimodeli ezintsha zamakhadi emizobo (Uthotho 8 eNvidia kunye Uthotho lwama-3000 kwi-ATI) luphuma kwi-PCIE.
Izibuko lePCI kwibhodi yakho yomama kulapho uqhagamshela khona ikhadi likamabonwakude, ikhadi lesandi ukuba alidityaniswanga, ukwandiswa kwezibuko le-usb njl.
Ewe, uninzi lweebhodi zee-mama zinesibuko esinye sekhadi lemizobo, i-PCIE okanye kancinci ukuya kuthi ga ngoku i-AGP. Ezinye iibhodi ze-mama ezikumgangatho ophezulu ziqukethe amazibuko amabini e-PCIE ukulunga amakhadi emizobo amabini. Kodwa lelo lelinye ibali. Ezi zibuko ziqhelekile (ubuncinci xa ndithenga ikhompyuter yam) zisebenza ngesantya se-16X. Kukho ezinye izibuko zePCIE ezisebenza ngesantya esisezantsi kodwa zihlala zingasetyenziswa. Ubuncinci andikaziboni izinto ze-PCI 1x ngaphandle kwamakhadi wesandi angaqhelekanga phaya.
Kulungile onita parody. Umbuliso.
Molo PenTxO, ndijijile kwaye kuya kufuneka ndikunike ngokuchanekileyo. Sele ndiza kulilungisa inqaku ukuze yonke into oyivezayo icace. Ndiyabulela kakhulu ngolwazi kwaye ndiyathemba ukuba uyaqhubeka nokutyelela iblogi xa kukho izilungiso ezininzi kufuneka zenziwe 😉
Umgubo wokugqibela ulungile ukwazi ukuba ngawaphi amakhadi asebenza kakuhle.
UFrancesc uzikhumbule ezo zixhomekeke kuxilongo lwe-X kodwa khange ndiyicinge loo nto. 😉
Ndidinga amanyathelo okufaka ikhadi levidiyo gforce 5200 nvidia
Mhlobo wonke amakhadi afakelwe ngokufanayo. Kuqala ucime ikhompyuter kwaye uyikhuphe, emva koko ususe ikhadi elidala ufake elitsha, uvule ikhompyuter emva koko ufake abaqhubi. Ilungile.
Pau Ipetroli sitsho
Ndine-AMD Athlon 1,04 GHz kunye ne-384MB ye-RAM. Ikhadi lam lemizobo luluhlu lwe-ATI's Radeon 9600.
Ndingathanda ukuba i-2,4GHz inyuse inkumbulo iye kwi-512MB kwaye iphucule ukubeka kwam ikhadi lemizobo elitsha. Ungandicebisa ntoni?
Umbulali weViniga uyintanda, ndifumana izinto ezininzi.
pau okwangoku andiyazi into efumaneka ngexabiso elihle kunye nomgangatho. Inye kuphela into endinokucebisa ngayo kukuba uthenge ikhadi ubuncinci iinyanga ezi-6 okanye ezisi-8 ubudala okoko lakhutshwa (ukulifumana litshiphile). Ngapha koko, ukuba ufuna ukudlala imidlalo enje ngeCall of Duty entsha, iyandinika ukuba uza kuphelelwa yi-RAM (iya kufuna i-1 giga) kunye neprosesa ukuba isisiseko esinye kufuneka sibe ne-3 GHz.
Ungayifaka imemori khadi ye-512MB? ukuba ndinendawo ecacileyo. Njengokunyuka ukusuka kwi-1,04 ukuya kwi-3 GHz.
Ndiyaqonda ukuba ndinayo ipc elula, akunjalo?
Enkosi ngokundiphendula. Imibuliso kubo bonke
Pau ndiyabona ukuba awunalo uluvo oluninzi malunga neHardware. Ukunyusa isantya seprosesa kuya kufuneka uthenge iprosesa entsha kwaye ubone umohluko kuya kufuneka uthenge ibhodi yomama entsha kunye neememori khadi onokuthi zingakusebenzeli kwaye ekugqibeleni kufuneka uthenge yonke into entsha. Kuya kufuneka uye evenkileni ukuze ujongwe.
Yinto ebendiyoyika. Enkosi mfo. I-Enorabuena yebhlog yakho kunye nomsebenzi owuthathayo.
uFabio Castillo sitsho
elona khadi lililo yimizobo ye-nvidia GEFORCE8800GTultra DDR3 726MB
Phendula u-fabio castillo
Ndineprobem nekhompyuter yam, indibonisa imsg eskrinini. hayi isisombululo esifanelekileyo ...
Ndine-SyncMaster 2032Mw esweni, iSyncMaster Magic kunye nekhadi lemizobo ye-Radeon hd 2400Pro.
Ukujonga i-cb x encinci, kwaye ndiyakwazi ukusebenza, ingaba yintoni ingxaki? enkosi
Phendula ukuze ubone
Ndine windows xp, 960 mb yenkunzi yegusha kunye ne-2.80 ghz, ndinengxaki ekudlaleni i-virtua tennis 3 kunye nembambano yehlabathi, andazi ukuba ndibona phi uhlobo lwekhadi lemizobo endinalo.
NDINOKUSETYENZISWA KAKHULU NDISOMBELE UMBUZO WAM NGOKUBA IKHADI LEGrafiki Ndibulele kakhulu kuwe.
Andimazi nokuba unekhadi, ndingambona phi? Ndingavuya ukuba ungandinika intambo, enkosi
Iziqithi zeCanary sitsho
Kwimeko yam, andizifumani iadaptha zokubonisa, ndifumana kuphela iadaptha zenethiwekhi.Andazi ukuba ndingenza ntoni.Ndidinga ukwazi ikhadi lemizobo elinekhompyuter yam kuba ndithenge umdlalo kwaye awunalo ' Umsebenzi ngenxa yekhadi lemizobo.? Kuba ayikhangeleki?
Molo, ndathenga ikhompyuter kwaye kwafuneka ndiyifomathile, andazi ukuba yeyiphi umqhubi wekhadi le-nvidia ekufuneka ndiyifakile kuba andilwazi uthotho lwekhadi lemizobo, ndingalubona njani uhlobo lodweliso endinalo ukufaka.
NdineWindows 7 kwaye andikwazi ukuyifaka.
Ndiphawula ukuba ikhompyuter yam ikhatshwa ngalo lonke ixesha, sele indiphambanisa! Ndingakubuza nceda ukuba uyandinceda ..
Ndifumanise kwi-intanethi, kwaye enye yeendlela kukuba ikhadi levidiyo linothuli ngoko ubushushu buyanda, kodwa ndifuna ingcebiso kunye noncedo ukuba kunokwenzeka.
I-MSN yam yile santi_pinchacampeon06@hotmail.com
Imvelaphi yegama lokuqala Robert sitsho
Molo NDINEBHODI M985G IBHODI YAM I-PENTIUM 4 3GHZ INE-1GB YE-RAM KISIERA UKWAZI UKUBA NDINOKWENZA IKHADI LEGrafiki YOKUSEBENZA OKUNGAKUMBI OKANYE NGAPHANTSI KWE-512MB
XF NDIPHENDULE NDIZOKUBA NOMBULELO
Molo, ndifuna ukuba undixelele ukuba yeyiphi ikhadi levidiyo elinokusebenzisa ipc yam ..? Ezi ziimpawu zePC yam!
Inkqubo yokusebenza: Microsoft Windows XP yobungcali
I-CPU: Iprosesa ye-Intel Pentium II
I-RAM: I-958 MB
Ikhadi leVidiyo: VIA Chrome9 HC IGP FAMILY
Enkosi ngoncedo lwakho nceda
Hayi! Ndilibele ukukuxelela ukuba kufuneka ndibeke le: 512 GB yeNVIDIA GEFORCE ye-7200 GS ..
Ngaba inokusetyenziswa kwikhompyuter yam?
Molweni nonke ndinengxaki enkulu, kufuneka ndithumele ividiyo kwi-tv ​​ye-6 kwi-pc yam, kodwa xa ndenza uqhagamshelo 2 kubo bandinike ividiyo kodwa ndinophazamiseko oluphezulu kwaye akukho mbala, ndiphatha i-xp ngememori 1,50, kunye Ikhadi levidiyo ndizamile i-3 geforce 6200 ye-128, i-256 kunye ne-512, ekuphela kwayo eyandinika umfanekiso kuyo yonke yayiyi-128, kodwa ngokucacileyo iyandixhoma xa ndithumela ividiyo ngu-dj obonakalayo. Abanye banokundixelela ukuba ndenze ntoni, okanye ukuba bayayazi indlela eyahlukileyo yokuthumela ividiyo, okanye ezinye izixhobo ezongeziweyo zokunyusa isantya sokudlulisa okanye enye into, inyani kukuba sele ndinqwenela kwaye kufuneka ndibeke isikwere ngenxa yombulelo wam webha.
UJean Paul sitsho
eli khadi levidiyo lilungile i-geforce 210 pci expression 2.0 1gb ddr2 eyacetyiswayo kum ikhompyuter yam andazi kangako ngale nto kodwa imodeli yebhodi yomama wam yi-intel g41d3 ngewindows 7 ram 3gb okanye iprosesa 2.0
Phendula u jean paul
molo ndinayo le pc kodwa ndifuna ukulibeka kakuhle eli khadi le vidiyo sele ndinayo kodwa ndilahlekile oyena mthombo wokwenyani we-6 kunye nePC-I EXPRES 6 PIN connection
Ndinayo le pc
INQANABA I3 550 3.20GHZ INKQUBO
IBHodi ye-INTEL DH55HC
Imemori ye-RAM 4GB DDR3 1333MHZ
IKHADI LEVidiyo xfx ATI RADEON HD 5770 1GB DDR5
kulungile ukuba iqhuba i-pc yam kodwa eli khadi ukuba bandixelele q! Yeyona nto ibalaseleyo kwaye ndifuna ukuyizama ukudlala i-pes 2011 kumgangatho ophezulu kodwa ndiya kuswela umthombo wamandla endiya kuba nawo q! ndithenge
Molweni bantu, kulungile, oku kulula… ukuze bakwazi ukubona idatha yePC yakho. Akukho sidingo sokukhuphela nantoni na, (ndicinga!).
Kukho indlela elula yokujonga ukuba yintoni i-PC yakho.
Kuya kufuneka ubambe iqhosha elithi "Qalisa" kwikhibhodi yakho kwaye ucinezele «R» (okanye kungenjalo uye ku «qala» uze «ubaleke».
Emva koko kuya kuvela iwindow encinci: apho ubeke "dxdiag". kwaye apho ulwazi luphuma khona kwi-PC
inkunzi yegusha, ikhadi levidiyo, ikhadi lesandi, njl.
Ukuba ndiyaphazama, ndicela uxolo ...
Ndizama nje ukunceda ...
Pringaooos! Umsebenzi omninzi wento ???? Ukwazi ukuyenza ngoluhlobo !! Imincili !!